Internet Essentials: Shuruudo iyo Qodobbo
Heshiisyada iyo Shuruudaha
WAXYAALAHA iNTARNEEDKA EE LAGA-MA-MAARMAANKA U AH XEERARKA BARNAAMIJTKA DHAN EE COMCAST
Barnaamijka The Internet Essentials (the "program") waxaa aasaastay Shirkada Comcast iyo waxayna maamula hay'adda kor ku xusan ee Comcast Cable Communication Management, LLC (wadajir ahaan, "Comcast"). Macmiil ("adiga," "kaaga," "kaqeybgale" ama "macmiil") kaas oo ka soo dhalaala Shardigii U-qalmashada (sida hoos ku qeexan) oo ka qeyb gala barnaamijka wuxuu yeelan doonaa khiyaarka inuu helo adeegga Internet Essentials oo leh xawliyo soodejin oo ilaa 50 Mbps ah iyo xawliyo koruraris gaaraya ilaa 5 Mbpsoo $9.95 bishiiba (lagu daray canshuuraha fuuli kara) ama adeegga Internet Essentials Plus leh xawliyo soodejin gaaraua ilaa 100 Mbps iyo xawliyo koruraris gaaraya ilaa 10 Mbps (mid walba, "Adeegga La Daboolay"-ya iyo si wadareeda, "Adeegyada La Daboolay")-ya ilaa $29.95 (lagu daray canshuuraha fuuli kara) iyo khiyaarka inaad ku soo gadato qalab xisaabeed $149.99 lagu daray canshuuraha fuuli kara ama sida sicirka sida laga yaabo ay go'aamisay oo soo ban dhigtay Comcast markii waqti la joogana (lagu daray canshuuraha fuuli kara) intaad ku jirto barnaamijka** oo markaas yeelo hanashada Mareeg-ku salaysan, daabicid iyo barnaamijyo tababarid fasallo-ku salaysan oo aan qarash dheeri ah lahayn.
Shuruudahaan waxay khuseeyaan Barnaamijka:
1. Barnaamijku wuxuu kaliya diyaar u yahay qoysaska (i) yaalla meel Comcast ka bixiso adeegga interneedka; (ii) qoyska xubin kamida ay qaadato nooc kaalmada dadweynaha kamida (?u qalmaaya kaalmada dadweynaha") taas lagu habeeyay https://internetessentials.com/apply https://internetessentials.com/apply ama si kale sida URL markaas oo Comcast laga yaabo inay ku talagasho gaarsiinta xog iyo cusboonaysiin barnaamijka is la markaasna ay siiso Comcast caddayn sida u-qalmashada kaalmada dadweynaha taaso waafaqsan habkii lagu sharraxay www.internetessentials.com/apply; (iii) aan qabin lacag dhaaftay waqtigii bixinta ama uusan maqnayn qalab aan la soo celin oo muddadiisu ka yar tahay 12 bilood, iyo (iv) aan xubin ka noqon adeegga interneedka ee Comcast sagaashankii 12 maalmood ee la soo dhaafay (qeybo 12(i)-(iv) si wadajira ayaa loogu gudbiyay "Shardiga U-Qalmashada").
2. Sannad walba, waxaa laga rabi doonaa inaad dib u xaqiijiso in xubin qoyskaaga kamid ahi ay wali u qalanto qaadashada kaalmada dadweynaha iyadoo laga rabi doono inaad Comcast ama wakiilkeeda la xilsaaray u keento caddaynta u-qalmashada kaalmada dadweynaha oo waafaqsan ogeysiisyadii loo diray cinwaanka qaansheegadyada ee faylka ku jira. Haddii aad gabto inaad keento xaashida caddanaysa in qof reerkaaga kamida uu kaalmada dadweynaha oo uu u qalmo uu qaato, waxaa loo qaadan doonaa inaad u qalmi kaqeybgalka barnaamijka.
3. Adigu u ma qalmi doontid kaqeybgalidda barnaamijka haddii (i) aadan ka soo dhalaalin Shuruudihii U-Qalmashada; (ii) aad gabto inaad xisaabta aad ku leedahay Comcast si wanaagsan u maareyso; (iii) Comcast joojiso inay gaarsiiso Adeeggii Daboolnaa meesha aad deggan tahay; ama (iv) aad gabto inaad keento caddayntii u-qalmashada kaalmada dadweynahaee lagu sifeeyay tuducyada 1 iyo 2 halkaan; ama (v) xisaabtaadii ku furnayd Barnaamijka la xiro. Ka qaybgalka barnaamijka ayaa sidoo kale laga yaabaa in la joojiyo haddii Adeegga Khidmadda la cusbooneysiiyo, la beddelo, ama lagaa bedelo sabab kasta. Haddii aadan xaq u lahayn Barnaamijka, laakiin waxaad sii wadaysaa Adeegga La-soo-galo ee Comcast, heerka caadiga ah iyo shuruudaha kale ee ku haboon iyo shuruudaha waxay khuseeyaan Adeegga La-Xiriiriyey.
4. Inta aad ka qeyb galayso barnaamijka, waxaad (i) heli doontaa Adeegga La Daboolay (ii) waxaad heshaa khiyaar hal-waqti ah si aad ugu soo iibsato qalabka xisaabinta $149.99 (lagu daray canshuurta fuuli karta)* inta aad barnaamijka ku jirto; oo (iii) waxaad heshaa barnaamijyo tababarid ku salaysan-fasallo, ku salaysan-Mareeg iyo daabacaad oo aan qarash dheeri ah lahayn. Qiimaha Adeegga La-xiray wuxuu ku kooban yahay hal qalab iyo Qalabka intarneetka. Xirmada kali-yagleelid baa ku jirta oo aan qarash dheeri ah lahayn. Waxaa khidmado dheeri ah la saarayaa guri-kutuurka qalabka, rakibitaanka xirfad-yaqaanka, hogagga dheeriga ee Adeegga Daboolan, adeegyada kale Xfinity iyo ballamada adeegga.
5. Haddii aad iibsato qalab kombuyuutar ah qayb ka mid ah ka qaybgalkaaga barnaamijka, qalabka kombiyuutarka waxaa lagu daboolayaa damaanad-qaadaha soo-saaraha ama qayb kale oo la aqoonsaday oo waa inaad toos u dirtaa wixii iyo dhammaan arrimaha la xiriira qalabka kombiyuutarka soo-saaraha ama qaybta kale ee saddexaad. Ma jirto damaanado dheeraad ah ee kombuyuutarka oo ay bixiso Comcast.
6. Adeegga intarneedka iyo adeegsiga qalabku waxay u qoolan yihiin shuruudaha iyo xeerarka halbeegga ee adeegga Comcast iyo habdhaqannada adeegsi la yeeli karo.
7. Comcast waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho barnaamika markii waqti la joogaba, oo ay ku jiraan, balse aan ku koobnayn, isbeddellada sicirka billaha, siyaalaha gaarka iyo/ama Adeegyada La Daboolay ee xawliga.
8. Waxaad ka heli kartaa xog ku saabsan siyaalaha gaarka ee barnaamijka hadda socda iyo waxtarrada www.internetessentials.com.
* Xaddidan hal qoyskiiba. Comcast wuxuu xaq u leeyahay inuu joojiyo lacagtaas.